Ifektri elihambayo - Abakhiqizi baseChina nabaphakeli
Isimiso sokusebenza somshini we-roller telescopic ongasetshenziswanga: i-telescopic roller elihambayo kanye ne-roller elijwayelekile elihambayo ziyizinto ezifanayo zokuhamba eziqhubekayo ezisebenzisa ibhande elihambayo lokuhambisa njengezinto zokuthwala nezinto zokudonsa ukuhambisa okokusebenza ngokuhamba kwebhande elihambayo. Uma kuqhathaniswa ne-roller conveyor ejwayelekile, ingeza ithuluzi lokugcina ibhande, idivaysi ebopha ibhande nezinye izindlela. Lapho imoto eshubile idlulela ekugcineni komsila, ibhande lingena ...
Ukuhanjiswa kwe-Raceway kufanelekile ukuhambisa zonke izinhlobo zamabhokisi, izikhwama, ama-pallets nezinye izimpahla. Izinto zokwenziwa ngobuningi, izinto ezincane noma izinto ezingajwayelekile kufanele zibekwe kuma-pallets noma emabhokisini enzuzo. Ingahambisa isiqeshana esisodwa sezinto ezisindayo noma ithwale umthwalo omkhulu womthelela. Kulula ukuxhuma nokuhlunga imigqa yesigubhu. Ingakha uhlelo lokuhamba lwezinto eziyinkimbinkimbi olunezintambo eziningi zedramu namanye ama-conveyor noma imishini ekhethekile ukuhlangabezana nezidingo zenqubo ezahlukahlukene. Iroli yokubeka ...
Ukukhiqizwa kobungcweti bokuhambisa imishini, i-mesh belt conveyor, ukuphakamisa. Ibhande elihambayo kanye nokuphakamisa ibhande elihambayo ngesimo sebhande le-PVC elihambayo, ibhande lensimbi lensimbi, ibhande le-chain plate, ukuthuthwa okuqondile nokuphakamisa kungaba, ikheshi esikubiza nangokuthi ukugibela okuhambayo, ukuze ibhande elihambayo likwazi ukungezwa ngokuhlukanisa nokuphakamisa ohlangothini ukuvimbela ukuvuza kohlangothi nokuslayida. Amafomu esakhiwo afaka: ukuhambisa okuqondile okuqondile, ukuphakamisa ukudlulisa, njll. Ibhande lokuhambisa lingaba ...
Izinzuzo zokuhamba ngeketango elihambayo: 1. Izindleko eziphansi, ukufakwa nokugcinwa okulula, isakhiwo esilula, isivinini sokudlulisa nokuqina. Ukuhambisa ibhande elihamba ngokushesha, ukulayishwa kwamaselula nokulayishwa kwe-guardrail belt conveyor, 2. Ukudlulisa okuzinzile, akukho ukunyakaza okuhlobene phakathi kwebhande kanye ne-conveyor belt, okungagwema ukulimala ku-conveyor; uma kuqhathaniswa nabanye abathuthi, umsindo mncane, ulungele indawo yokusebenza Isigaba esithule siyadingeka. Amasondo amancane amasondo erabha aqinile ...
Isingeniso seBrand Le nkampani igxile ekukhiqizeni i-industrial conveyor, umugqa ozenzakalelayo womhlangano, ibhande elihambayo, i-chain plate conveyor, i-power roller line, i-non-roller roller line, umugqa wokumiswa, umugqa wokukhiqizwa kwe-chain chain, umugqa wokukhiqiza ipuleti osindayo, umugqa we-plug-in , umugqa oshelelayo, umugqa wokuguga, neminye imishini engajwayelekile. imininingwane yomkhiqizo Imingcele yobuchwepheshe ye-o-belt roller conveyor Motor parameter: yakhelwe ngokuya ngesisindo sokuhambisa, isivinini sokuhambisa noma i-dema yekhasimende ...